बिज्ञान प्रबिधि Archives - Masti Khabar
के तपाईको मोबाईल चार्ज गर्न लामो समय लाग्छ? अब यस्तो गर्नुुस जस्ले छिटो चार्जहुन्छ
काठमाडौं, कात्तिक १७ । १. मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नुहोस् : यो एकदम सामान्य र सजिलो तरिका हो । जसबाट एकदमै तीव्र गतिमा मोबाइल चार्ज गर्न सकिन्छ । फ्लाइट मोडमा मोबाइल राख्दा सबै फङ्सन बन्द हुँदैनन् […]
नेपालको इन्टरनेट दक्षिण एसियाकै महँगो काठमाडौँ । मूल्यका हिसाबले नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट दक्षिण एसियाकै महँगो पाइएको छ । चर्चित म्यागेजिन ‘दी इकोनोमिस्ट’ले हालै सार्वजनिक गरेको समावेशी इन्टरनेट सूचक (इनक्लुसिभ इन्टरनेट इन्डेक्स २०१९) प्रतिवेदनमा नेपालमा […]
‘नेपाली स्याट वान’ नेपालको पहिलो स्याट्लाइट बारे यस्तो तथ्य बाहिर अयो ! सरकारले किन खर्च गयौ यति ठूलो रकम(भिडियो)
‘नेपाली स्याट वान’ नेपालको पहिलो स्याट्लाइट बारे यस्तो तथ्य बाहिर अयो ! सरकारले किन खर्च गयौ यति ठूलो रकम(भिडियो) अन्तरिक्षमा पुगेको ६ दशकपछि नेपालको आफ्नो भूउपग्रह (स्याटेलाइट) अन्तरिक्षमा पुग्ने भएको छ । जापानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको […]